Ny masinina fanaovana saron-tava earloop dia hafainganam-pandeha avo lenta ary mandeha ho azy tanteraka. Ny sosona anatiny sy ivelany an'ny sarontava dia vita amin'ny lamba tsy tenona, ny sosona sivana afovoan'ny lamba notsofina ary notapahina ny landihazo, ny tetezana orona dia fitaovana elastika, noho izany dia tena mahazo aina ilay sarontava.
Ny masinina dia afaka mamokatra sarontava 2 habe, mety amin'ny olon-dehibe sy ankizy.
KN95 haingam-pandeha havoana famolavolana maska ​​mandeha ho azy tanteraka. ity masinina ity dia mamahana ny horonan-taratasy iray manontolo, miaraka amina fehin-kibo vita amin'ny lamba tsy misy tenona, miaraka amin'ny fanapahana sy fikolokoloana ny sofina, ny horonan-tsofina roa dia mihodina ary manapaka avy hatrany, avy eo miforitra roa ny vatan'ilay sarontava. Aorian'ny fametahana sy ny fampidirana ultrasonic dia mihodina ary miorina ny sarontava. Mety hahatratra ny famokarana tsy misy fijanonana, mandeha ho azy, avo lenta.
Masinina welding welding KN95 semiauto, izay mandray ny ultrasonika mba hikodiadia sofina elastika amin'ny lafiny roa amin'ny saron-tava KN95. Mpikirakira iray ihany no ilaina mba hamenoana ny dingana rehetra amin'ny fikolokoloana sofina.
Haingam-pandeha haingam-pandeha iray motera servo anaty masinina fonosana automatique automatique automatique, dia maodely iray mahomby sy mahomby. Aorian'ny fanaovana ny maska ​​amin'ny masinina fanapahana maska, ny milina fanamafisam-peo servo anatiny izay afaka mameno tsara ny fantsom-bozaka, dia misy fehikibo conveyor mask, lozisialy manintona sofina, mekanika fanamafisam-peo ultrasonika, rafitra fandraisana maska.
Haingam-pandeha haingam-pandeha, famafana ary famolavolana masinina saron-tava, mampiasa teknolojia ultrasonic hanambatra lamba 3 ka hatramin'ny 5 an'ny lamba tsy vita amin'ny PP, ento ny tetezana orona, ary tapaho ny vatan'ny sarontava.
Sarety iray servo maotera servo ivelany earloop mandeha ho azy masinina fanaovana masinina
Hafainganam-pandeha haingam-pandeha iray servo motor masinina fonosana sofina ivelany dia maodely tena mahomby sy azo ampiharina, ampifandraisin'ny tsipika conveyor, ao anatin'izany ny masinina mamorona masinina sy ny masinina fonosana servo ivelany
Masontsivana ara-teknika TOSIKARATRA 220V 50Hz Herinaratra 17kw Teknan'ny rivotra 6kg / ㎝ frequency frequency frequency frequency frequency frequency frequency frequency ≧ 80put / min Structure Masinina milina fantsom-baravarankely masinina, tsipika hisintona Earloop, fantsom-pamantarana milina fantsom-pamokarana Ultrasonic Fomba fanaraha-maso fotodrafitrasa PLC Masinina habe 4500 * 2400 * 2010mm Milanja 1000kg Saron-tava masom-baravarana 175x95mm Fandraisana Ny fanaovana pirinty ...
Masinina fanidiana earloop manual, dia milina welding roa, tsotra, mora, mora vidy, mila mpandraharaha iray ihany.
Masia welding welding earloop, ampifandraisin'ny tsipika conveyor, mekanika manintona earloop, mekanisma fantsom-pandrefesana ultrasonika, rafitra fandraisana maska. Aorian'ny fanaovana ny maska ​​dia vita amin'ny milina fanapahana sarontava, avy eo atsofoka ao anaty fehikibo milina fanamafisam-peo ny vatan'ny sarontava, afaka mameno ny lobolam-paty mandeha ho azy izy io. Ny endrika famolavolana ity milina fanodinana sofina semiauto ity: tsotra sy mora ampiasaina, welding mandeha ho azy, azo antoka ary azo itokisana, miaraka amin'ny fahaizan'ny toetr'andro, mifanentana ary fahombiazan'ny vidiny.